Jaamac Goobe oo loo magacaabay Hanti-dhawrka guud ee Puntland & G/sare Dayr ku xigeenka ciidanka Daraawiishta. – Radio Daljir
Maajo 16, 2009 12:00 b 0
Garowe, May 16 | Wareegto ka soo baxday madaxtooyada Puntland ayaa M/weyne C/raxmaan M. Faroole uu xilal sare ugu kala magacaabay guddoomiyaha Hanti-dhawrka guud ee Puntland, iyo ku xigeenka taliyaha ciidanka Daraawiishta ee Puntland.
Jaamac Maxamed Cismaan ‘Goobe’ ayaa loo magacaabay guddoomiyaha Hanti-dhawrka guud ee Puntland, halka G/sare Dayr Xaaji Cabdi loo magacaabay ku xigeenka taliyaha ciidanka Daraawiishta ee Puntland.
Xilalka cusub ee uu magacaabay M/weyne Faroole ayaa qayb ka ah hirgelinta qorshe siyaasadeedka xukuumada cusub ee haysay hogaanka Puntland 3-dii bilood ee la soo dhaafay.
Wareegtada lagu magacaabay guddoomiyaha Hanti-dhawrka guud ee Puntland ayaa u dhignayd sidan:
Xeer Madaxweyne Lr36, May 16, 2009, kuna saabsan magacaabida Guddoomiyaha Hanti dhowrka Guud ee DGPL.
Markuu arkay: Dastuurka DGPL qodobkiisa 45-aad, faqradiisa 19-aad.
Markuu arkay: Aqoontiisa, kartidiisa iyo xilkasnimadiisa,
Markuu tixgeliyey: Baahida loo qabo habsami u socodsiinta Guddoomiyaha Hanti Dhawrka Guud ee DGPL.
1. Waxaa loo magacaabay Jaamac Maxamed Cismaan (Goobe).
Wareegtada lagu magacaabay ku xigeenka taliyaha ciidanka Daraawiishta ee Puntland ayaa u dhignayd sidan:
Xeer Madaxweyne, Lr37, May 16, 2009, kuna saabsan magacaabida Taliye ku xigeenka Ciidanka Daraawiishta.
Markuu arkay: Dastuurka DGPL qodobkiisa 54-aad, faqradiisa 19-aad.
Markuu arkay: Aqoontiisa, kartidiisa iyo xilkasnimadiisa Ciidan,
1. Waxaa loo Magacaabay G/sare Dayr Xaaji Cabdi Taliye ku xigeenka Ciidanka Daraawiishta DGPL.
Macallim C/raxman oo u hadlay Al-shabaab oo ka hadlay qabsashada Jawhar, iyo Muqdisho oo ay dul hoganayaan daruuro colaadeed.